COVID-19 Xogta Dhibaatada
Rabshada Guriga &amp; Weerar Galmood
U doodista Naafanimada
Mashruuca Sharciga Shaqaalaha Beeraha
Furniinka Furiinka iyo Rugaha Caafimaadka Halyeeyada
Print/ Download Materials
Ku tabaruc hadda
Fursadaha Pro Bono
Law & Pre Law Students
Race for Justice 5K Run/Walk
La kulan Kooxda
Xirfadaha iyo Fursadaha
Qaadashada khadka tooska ah
Fursadaha Pro Bono ee Qareenada
Tabaruca pro bono ee Ururka Gargaarka Sharciga ee Mid-New York, Inc, waa hab fiican oo isbeddel loogu sameeyo nolosha dadka dakhligoodu hooseeyo, waayeelka, dhibbanayaasha rabshadaha, iyo kuwa kale ee aan awoodin caawimaad sharci markay aad ugu baahan
Qareenada mutadawiciinta ahi waxay u adeegaan macaamiisha dakhligoodu hooseeyo ee ka imanaya dhamaan aaggeenna 13 adeegyada degmada waxayna naga caawiyaan inaan sii wadno la kulanka macaamiisheenna baahiyahooda markay maalgelinta adeegyada sharciga madaniga ahi xadidan yihiin.
Qareenadeena Pro Bono Sidee Ugu adeegaan Danta Guud?
Sannadka 2019, qareennada iskaa wax u qabso ee mutadawiciinta ah ee ka qayb qaadashada barnaamijka Qareenka Gaarka ah ee gaarka loo leeyahay waxay dhammaystireen dacwado 586 waxayna aqbaleen 674 kiis oo cusub
Waa Noocee Fursadaha Pro Bono ee La Heli Karo?
Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan la jaanqaadi karno aagga aad xiiseyneyso mid ka mid ah fursadaha badan ee xiisaha leh ee loo yaqaan 'bon bono'. Waa tan muunad qaadista:
La-Taliyaha Taleefanka iyo Talo-siinta Taleefanka Sharciga ah: Waxaad bixisaa la-talin taleefan iyo talo ah oo ku saabsan arrin kasta oo sharci oo madani ah oo aad ka doorato ku habboonaanta gurigaaga ama xafiiskaaga.
Garyaqaanka Barnaamijyada Maalinlaha ah: Waxaad ku bixisaa la-talin iyo talobixin shaqsi ahaan rugta caafimaadka ee loo yaqaan 'pro bono clinic'; Taakulaynta Ilmaha, Macaamilka, Musalafnimada, Furriinka, Sharciga Waayeelka, Guriyeynta, ama rugaha caafimaadka ee Veterans.
Rugaha Furiinka ee Pro Se: Waxay faraan bukaan socod eegtada furiinka, iyagoo ka caawiya macaamiisha buuxinta xirmada furiinka aan la tartamin.
Qorshaynta Guryeynta Sahlan: Qabyo dardaaranno fudud, wakiillada daryeelka caafimaadka, awooda qareenka ee macaamiisha jiran ama naafo ah.
Matalaad Toos ah: Ka wakiil macaamiisha arrimo sharci oo kala duwan, oo ay ku jiraan masruufka carruurta, musalafnimada, furiinka, deganaanshaha, faa'iidooyinka dadweynaha, iyo inbadan.
Barnaamijka hagida: U adeego sidii lataliye ama la-taliye kiisaska LASMNY.
DIGNIIN MASHRUUC CUSUB
Mashruuca Ceyrinta Maxkamada Magaalada Binghamton: Sii talo iyo / ama matalaad kiraystayaasha halista ugu jira in guriga looga saaro bixinta kirada ee Maxkamada Magaalada Binghamton. Waxaan raadineynaa 25 mutadawiciin cusub. Kala xiriir Arlene Sanders (607) 231-5950 ama asanders@wnylc.com
Waa maxay Faa'iidooyinka iskaa wax u qabso?
Waxaad la kulmi doontaa abaalmarinta shakhsi ahaaneed ee ka caawinta shaqsi u baahan. Intaas waxaa sii dheer, waxaad heli doontaa:
Caymiska Xad-gudub la'aanta iyada oo loo marayo Bulshada Gargaarka Sharciga ee Mid-New York, Inc.
Sii wadida Amaahda Waxbarashada Sharciga
Aqoonsiga Pro Bono ee heer degmo iyo heer gobol
Foomamka iyo Cilmi-baarista
Taageero socota oo ka socota shaqaale heersare ah oo pro bono ah
Garyaqaanka Emeritus: Tabaruceyaasha waayeelka ah sidoo kale waxay u qalmi karaan "Qareen Emeritus" oo loo marayo Ururka Qareenada Gobolka New York (eeg www.nycourts.gov/attorneys/volunteer/emeritus/ )
Ka Faa'iidayso Barnaamijkeenna Gudbinta!
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka caawiso mid ka mid ah macaamiishaada dakhligoodu hooseeyo ee loo yaqaan 'pro bono' iyadoo loo marayo Gargaarka Sharciga, waxaan sameyn karnaa taleefan isla markiiba waan kuu sheegeynaa inay u qalmaan iyo in kale. Waxaad heli doontaa waxtarro la mid ah gudbinta dhaqameed.
Sideen U Saxeexaa?
Haddii aad jeclaan lahayd inaad bixiso shaqo bono, fadlan la xiriir mid ka mid ah shaqaalaheena dadaalka hoose. Waxaan kula socon doonaa si dhakhso leh si aan ugala hadalno fursadaha u dhigma danahaaga.
Arlene Sanders, Pro Bono Xeer ilaaliyaha (607) 231-5950 ama Arlene.Sanders@LASMNY.org
Renee Kolwaite, Paralegal (xafiiska Utica) taleefanka (315) 793-7061 ama Renee.Kolwaite@LASMNY.org
Pam MacLaren, Paralegal (xafiiska Binghamton) oo laga helo (607) 231-5925 ama Pam.MacLaren@LASMNY.org
Waxaan halkan u nimid inaan ku taageerno oo aan hubino in khibradaada pro bono ay tahay mid wanaagsan oo abaalmarin leh.